नेपाल आज | युधिष्ठिरको अपूर्व भातृप्रेम
यो कथा युधिष्ठिरको नरकको यात्राको हो । युधिष्ठिर स्वर्गमा पुगेर देवताहरुसंग भने– ‘हे देवगण ! म त्यहीँ बस्न चाहन्छु , जहाँ मेरा भाइ, द्रौपदी, मित्र, बन्धुबान्धवहरु छन् । उनीहरु जहाँ छन, त्यो नै मेरो लागि स्वर्ग हो । तिनीहरु विनाको स्वर्ग मेरा लागि नर्क समान हुन्छ । युधिष्ठिरको यस्तो आग्रह सुनेर देवताहरुले एउटा दूतलाई बोलाएर उनको भाइहरु भएको ठाउँमा लैजान भने ।
ती देवदूतले युधिष्ठिरलाई लिएर ज्यादै डरलाग्दो बाटोबाट अगाडि बढ्न थाले । त्यो बाटो ज्यादै विकट र अन्धकारपूर्ण थियो । बाटोको दायाँबायाँबाट ज्यादै नमिठो दुर्गन्ध आइरहेको थियो । भयानक आकृति यताउता डुलिरहेका थिए । युधिष्ठिर थाहै नपाई नरक पुगे । त्यहाँको अवस्था देखेर उनी काँप्न थाले ।
त्यहाँ पापीहरुले अनेकथरि यातना पाइरहेका थिए । उनीहरुको क्रन्दनले युधिष्ठिरलाई द्रवित बनायो । आफूलाई लिएर आउने दूतलाई सोधे– ‘दूत, यो कहाँ जाने बाटो हो ? यो बाटोबाट अझ कति हिँड्नु पर्छ ? यो कुन ठाउँ हो ?’ दूतले भने– ‘महाराज, म यस विषयमा केही भन्न सक्दिन । बरु तपाईंलाई जाने मन छैन भने फर्कन सक्नुहुन्छ ।’
दूतको यस्तो जवाफपछि युधिष्ठिर त्यहाँबाट फर्कन लागे । उनी फर्कन लागेको देखेर चारैतिरबाट आवाज आयो– ‘तपाईं यहाँबाट नफर्कनुस् । तपाईंको शरीरबाट निस्केको पवित्र गन्धले हामी धन्य भइरहेका छौं । तपाईंको दर्शनले कृतार्थ भइरहेका छौं ।’
दयामूर्ति राजा युधिष्ठिरले ती नरकवासीहरुको अनुरोध सुनेर भने– ‘तिमीहरु शान्तिपूर्वक बस । यदि म यहाँ रहँदा तिमीहरुलाई आनन्द हुन्छ म यहाँ तिमीहरुलाई यस हालतमा छोडेर कदापी जान्न । साथै मेरो शरीरबाट निस्केको बास्नाले तिमीहरुको मन शान्त हुन्छ भने म तिमीहरुका लागि नरक भोग्न तयार छु ।’
त्यसैबेला चारैतिरबाट आवाज आयो– ‘दाज्यै धेरै दिनपछि हजुरको दर्शन पायौं ।’ आफूलाई दाज्यै भनी पुकारेको आवाजले युधिष्ठिर अचम्मित भएर सोधे– ‘तिमीहरु को हौ ? किन मलाई दाज्यै भनेर बोलाएका हौ ?’ युधिष्ठिरको यस्तो प्रश्न टुंगिन नपाउँदै फेरि चारैतिरबाट आवाज आयो– ‘म कर्ण हुँ, म भीम हुँ, म अर्जुन हुँ, म द्रौपदी हुँ । हामीहरु द्रौपदीका छोराहरु हौं ।’
आफ्ना बन्धुवान्धवहरुको आवाज सुनेपछि युधिष्ठिरले दूतलाई भने– ‘अब म आफ्ना बन्धुबान्धवहरुलाई छोडेर यहाँबाट अन्यत्र कतै जान्न । उनीहरु जसरी यहाँ बसेका छन, म पनि त्यसरी नै उनीहरुसंग बस्छु ।’
युधिष्ठिर नरकबाट नफर्केपछि दूत स्वर्ग गएर देवताहरुलाई सो कुराको जानकारी गराए । तब स्वयं ईन्द्र त्यस ठाउँमा आएर युधिष्ठिरलाई आश्वासन दिँदै भने– ‘महाराज, तपाईंले कुनै पनि प्रकारको चिन्ता नलिनुहोला । तपाईंका आफन्तहरुले थोरै मात्र पाप गरेका थिए र उनीहरुलाई थोरै भएपनि नरकको स्वाद चखाइएको हो । अब यिनीहरु स्वर्गमा जान्छन् । तसर्थ तपाईं पनि यहाँबाट स्वर्ग फर्कनुहोस् ।’
तर पनि युधिष्ठिरले त्यहाँबाट स्वर्गतर्फको यात्रा अघि बढाएनन् । उनले सवै नारकीय जीवहरुलाई स्वर्गमा स्थान नदिएसम्म त्यहाँबाट एक पाइला अघि नसार्ने अडान लिए । उनको यस्तो अलौकिक दयाभाव देखेर देवताहरु प्रसन्न भए । उनको पुण्यप्रतापको बलले सारा नारकीय जीवहरु स्वर्गको अधिकारी भए । स्वर्गमा देवताहरुले युधिष्ठिरको भव्य स्वागत गरे ।
जटिल प्रकृतिका संक्रमितका कारण अस्पताल भरियो, आइशोलेसन रित्तै